YAKANAKA, ichiita kuti mhuka dzitambe muapp yevhiki | IPhone nhau
YAKANAKA, ichiita kuti mhuka dzitambe muapp yevhiki
Pave nesvondo zvekare, saka tatova neapp nyowani yemahara muApp Store. Mazhinji mashandisirwo ekusimudzirwa uku mimwe mitambo inoshumirwa yekunakidzwa panguva dzakati, asi iyi mitambo haisi kazhinji yakanyanya kunaka kune vadiki mumhuri. Pane ino nguva, iyo app yevhiki es ANOGARA, kunyorera kwevana kubva pamakore matanhatu kusvika pamasere ezana rinozoita kuti vana vadiki vave vanyori vezvipfuyo
Chii icho vana vanofanirwa kuita mu LOOPIMAL? Zvakanaka, pese panotanga kunyorera, mhuka yakasiyana inowoneka uye zvavanofanira kuita ndizvo wedzera mumutsara wenguva mishanu mafambiro akasiyana kuti mhuka dzitambe sezvakaratidzwa. Izwi rekuti "chiuno" mumusoro chiripo nekuti kutamba kuchadzokorora nekudzokorora kusvikira mumwe munhu avamisa, saka vane tambo kwechinguva. Asi, iwe waifunga here kuti iwe unogona chete kuti uite mhuka yekutamba?
KUSIMBIRA kuchaita kuti vadiki vafare vachiita mhuka dzakasiyana siyana kutamba
Nekuti kutamba kuri nani mukambani, LOOPIMAL inopawo iyo mukana wekuita kusvika kumhuka ina kutamba panguva imwe chete. Mhuka yega yega ichave neyayo nguva, saka zvidiki zvinokwanisa kusarudza kuti zviite kuti dzitambe zvakafanana kana kuti imwe iende yega. Sezvandareva, vana ndivo vanozove ivo choreographer vanozofunga kuti mhuka dzinofanira kutamba sei.
Zvine musoro, chishandiso ichi hachina kunangidzirwa kwandiri uye handioni chichifadza, asi ini ndatochitsvaga ndikachibatanidza neangu ID yeApple, kana iwe uchizoda kutamba chero cheadiki munharaunda yangu. Uye zvakare, kuve iko kushanda kwevhiki zvichave vakasununguka kusvika svondo rinouya, saka haufanire kushandisa kana sendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » YAKANAKA, ichiita kuti mhuka dzitambe muapp yevhiki
Yepfuti yakaita iPhone kesi inogona kukutsamwisa iwe